मोबायल एसएमएस काण्ड (पहिलो भाग) – मझेरी डट कम
तर यिनै छोटा सन्देशकै कारणबाट उनी पछिल्ला केही दिनदेखि निकै नै व्याकुल छन् । उनी अर्थात् समाजका एक सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति रुपकमान । उनलाई लब्धप्रतिष्ठितै भने पनि हुन्छ । त्यसो नभने पनि हुन्छ । उनी कुनै प्रतिकृया देखाउँदैनन् । सामाजिक सेवा गर्छन्, साहित्य, कला र राजनीतिमा पनि अलिकति चासो राख्छन् । यसै कारण उनले निकै व्यस्त हुनु परेको छ । यस व्यस्तताको कारणले नै उनलाई मोबायल चाहियो । पहिले ता उनलाई मोबायलको आवश्यकता नै नपर्ने अठोट थियो तर केही पछि भने उनलाई यो नभई नहुने अवस्था आइपुग्यो । अनि उनले पनि जोडे एउटा मोबायल परिवारका अरु सदस्यहरूका साथ । मोबायल के जोडे तनाब पनि जोडिएको अनुभूति भएको छ केही दिनदेखि उनलाई ।
कहिलेकाहीं उनको मोबालयमा पनि अरुकै जस्तो गरी कुनै अज्ञात नम्बरबाट फोन आउँछ । उनी उठाउँछन् । उताबाट कसैकसैको आवाज पनि आउँछ, उनका साथ केही नबुझेझैं गरी सोध्छ पनि, उनी केही उत्तर पनि दिन्छन् । अपरिचितका हुन्छन्, केही कलहरू झुक्किएर आएका होलान् भन्ने लाग्छ उनलाई । उनी पनि ता झुक्किन्छन् । धेरैजसो आफन्तहरूबाट र उनका सामाजिक कार्यकर्ताहरूबाट नै उनलाई फोन आउँछ । यस अर्थमा उनलाई यसबाट फाइदै पनि भएको छ । तर कति कलहरू उनका अपरिचितहरूबाट पनि आएका छन् ।
‘आमा हो, कति मिठो बोली, गाली पनि यस्ता मिठा शब्द र बोलीबाट हुने भए ता जीवन सफल हुने थियो । आफ्नो ता कर्मै खोटो !” उताबाट महिलाको आवाज अँझै अघि पुगेर कुरा गर्न हतारिएको बुझिन्थ्यो । अनि रुपकमानले यो फोनलाई धन्यवाद भन्दै काटे । यो फोन आउने घटना यति नै भएको थियो त्यति बेला । तत्कालका लागि यसभन्दा बढी फोनबार्ताबाट कुनै घटना भएको थिएन । यसबाट उनलाई ठुलो तनाव केही पनि भएन । आ ! आइरहन्छन् नि नकच्चरीहरूका फोनहरू । उनले सोचेका थिए । तर भोलिपल्ट यसै नम्बरबाट निकै पटक मिसड कल आयो । उनले वास्तै गरेनन् । फोनलाई साइलेन्ट मोडमा राखे । साँझ पख नेपालीमै लेखिएको सन्देश उही नम्बरबाट उनको मोबायलमा आयो, सन्देश निकै लामो थियो— ‘मेरो प्रिय साथी, मिठो पप्पी । फोनमा भेट भएपछिको यो मेरो पहिलो पप्पी हो मेरो प्रियका लागि । दिउसो किन फोन नउठाएको ? मैले के त्यस्तो पाप गरेकी छु र फोन नउठाएको ? फोन उठाउँदैमा म तपाईंको सर्वस्व लुटेर लान्न के रे । आफूलाई भने कति माया लाग्छ उसलाई भने कुनै वास्तै छैन । कस्तो निष्ठुरी !’
यस्तो सन्देशको आगमनको क्रम दुई हप्ता जति लगातार हुँदै गयो । सुरुका दिनहरूमा यस्ता कल र सन्देशबाट उनी अलिक आतङ्कित हुने गरेका थिए । तर आज भोलि उनले यसलाई पचाइसकेका छन् अनि केही मात्रामा ता आकर्षित पनि भएका छन् । नयाँ नयाँ प्रविधिबाट मानिस आकर्षित हुन्छ नै । हो, वास्तवमा रुपकमानको मोबायलमा आउन थालेका यस्ता सन्देशहरूसँगै जोडिएर आउने मायाका लवजहरूबाट रुपकमान पनि केही आकर्षित भइसकेका छन् । अँझ भन्नुपर्छ उनी यस्ता कलहरू र सन्देशहरूबाट मोहित पनि भएका छन् । अनि सोच्छन् यस्तो फाइदा रैछ यसमा अनि केटाकेटीहरू के छोडून् त मोबायल ? कुनामा पसेर घन्टौं च्याट त्यसै ता गरेका होइन रहेछन् बा ! उनले सोचे ।
एक दिन बिहानदेखि बेलुकैसम्म सन्देश आएन । मिसडकल पनि आएन । सधैं आउने गर्थ्यो मिसड कल, सधैं आउँथ्यो सन्देश, सधैं आउँथे मिठामिठा कुराहरू, मायाका मिठा मिठा कथनहरू, अनि साना साना मुक्तक जस्ता मिठा मिठा कविता वा गजलका टुक्राहरू । छैनन् त आज ! के भयो हँ आज ? बिरामी पो परी कि ? वा कुनै घटना दुर्घटनामा पो परी कि ? के भयो हँ त्यसलाई ? उनको मनमा बडो गहिरो शङ्का पर्यो । कति बेला आउने हो फोन ? कति बेला आउने हो सन्देश ? उनी अधिर भएर पर्खन थाले । प्रतीक्षाको घडीलाई थाम्न नसकेर उल्टै उनैले कल गरे । उताको फोन स्वीच अफ थियो । एक मन ता बल्ल बल्ल त्यसबाट मुक्त हुन लागिएछ भनेर खुसी पनि भए तर उनको अर्को मनले के मानोस् ! उनको अर्को मन अँझ अधीर भयो । उनलाई भित्र भित्र चौ चौ भइरहेको थियो । किन होला आज एक पटक पनि सन्देश प्रवाहित भएन, के परेछ कुन्नि ? किन फोन पनि अफ गरेकी होली त्यस मोरीले ? खुबै माया गर्छु भन्थी, त्यही हो त माया ? उनको मन यही सोचेर उनैलाई समेत चञ्चल पारिरहेको थियो । उनका मनभरि यो बाहेकका अरु कुराहरू पनि खेलिरहेका थिए । मन तरङ्गित थियो । छाती केही भारी पनि भएको थियो । केही ऐंठन भएको जस्तो भान उनलाई भइरहेको थियो ।
केही पछि आफैं उनले तर्कसहित निर्णय गरे— फोनै बन्द गरेपछिलाई अब के कुरा रह्यो र ? के परेर फोन बन्द भएको होला ? बरु सोध्न पाए पनि हुन्थ्यो । केही कुरा गर्नै पाए पनि हुन्थ्यो । आखिरी कुरै ता हुन्, के लछार्पाटो लाग्ला केही कुराहरू गर्दैमा । बिहे गरेका मान्छेले चैं कुनै आइमाइसँग कुरै गर्न नहुने भन्ने के छ हँ ? उनको मन अलिकति कडो भएझैँ भएर फोनै गर्न तम्सियो । तर कडो भएको त्यो मनको कठिनता पानीको फोको झैं तत्काल फुटेर बिलायो उनको व्यावहारिक स्थितिबोधका अघि । परिवारले यो सबै कुरा थाहा पायो भने उनको के हविगत होला ? यही कुरा सोचेर उनको त्यो मन तरलित भयो । फोन नआए पनि हुने, सन्देशहरू नआए पनि हुने भन्ने भाव मनमा कताकता लुकेर हराएको बेला र अधैर्यताका साथ प्रतीक्षा पनि गरिरहेको बेला जे त पर्ला भन्ने कडो निर्णय गरेर एक पटक फोनै गरे । फेरि पनि फोन बन्द छ । यो मनै पनि तरलित भएर त्यसका मोबायलमा पुगे पनि ता हुने नि ! हँ के भयो त्यसलाई आज ? ए बाबा हो ? फोनै बन्द गर्नु पर्ने कारण के परेछ हँ ? उनले सोचे । अँझै सोचे— मजस्तै लुकी लुकी फोन गर्थी क्यारे । परिवारबाट पक्डाउ परी होली ! आज चैं भेटिछेस् । ठिक परेछ मोरीलाई । यस्तो सोच्तासोच्तै रुपकमानको मन फेरि फर्कियो अर्कातिर अनि सोचे– कति गाली खाई होला बीचरीले ? हो कुरा यो चैं पक्का हुनु पर्छ, कुन नाठालाई फोन गर्छेस् ए…. भनेर उसले झपार खाएको हुनु पर्छ ।
बल्ल उनलाई निद्रा लागेको छ । अनि उनका मनमा के गरौं र कसो गरौंको दोधारको जो ओइरो लागेको थियो त्यो क्रमशः हराएर गएको छ । मनभरि द्वन्द्वको चक्रवात नै आएको थियो त्यो पनि हटेर गएको छ । हेरौं रुपकमानका मोबायलको मिसड कल र सन्देश यात्राको लाइभ टेलिकास्टको अन्त कसरी हुने हो । उनीहरूको यो क्रम चालु भएकोले अन्त कसरी हुने हो भन्ने कुरा बुझ्न ता यसपछिको शृङ्खला दुई र तिनको अपहत्ते र अवतरण भन्ने कथाहरू पढ्नलाई हामीले पनि उनैले जस्तो गरी प्रतीक्षा गर्नै पर्छ ।
2016-12-13 14:25:26 +0000